ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီးအကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းဖြင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်သည့်စက်ယန္တရားများကိုကျွန်ုပ်တို့တီထွင်ခဲ့သည်, ငါးမုန့်ညက်, အရိုးမှုန့်, ပြောင်းဖူးမှုန့်, ခွေးအစားအစာအောင်အဓိကပစ္စည်းများအဖြစ်ပဲပုပ်နှင့်အခြားအစေ့ '' အမှုန့်, ကြောင်အစာ, နှင့်အခြားမည်သည့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာ,ဒီအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာများမှထုတ်လုပ်သောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာသည်ပြည့်စုံသောအာဟာရဓာတ်၏အားသာချက်များရှိသည်, မြင့်မားသောအစာခြေခြင်းနှင့်စုပ်ယူမှုနှုန်း, နှင့်အချို့သောရောဂါများကိုကာကွယ်တားဆီးနိုင်ပါတယ်
အမျိုးမျိုးသောနို့တိုက်ကျွေးရေးတောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံပစ္စည်းကိရိယာထုတ်လုပ်သူအဖြစ် , ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီးအကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းဖြင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်သည့်စက်ယန္တရားများကိုကျွန်ုပ်တို့တီထွင်ခဲ့သည်, ငါးမုန့်ညက်, အရိုးမှုန့်, ပြောင်းဖူးမှုန့်, ခွေးအစားအစာအောင်အဓိကပစ္စည်းများအဖြစ်ပဲပုပ်နှင့်အခြားအစေ့ '' အမှုန့်, ကြောင်အစာ, နှင့်အခြားမည်သည့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာ။ ဒီအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများအားဖြင့်ထုတ်လုပ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာပြည့်စုံသောအာဟာရ၏အားသာချက်များရှိပါတယ်, မြင့်မားသောအစာခြေခြင်းနှင့်စုပ်ယူမှုနှုန်း, သိပ္ပံနည်းကျရေးဆွဲရေး, အရည်အသွေးစံ, အဆင်ပြေသောအစာကျွေးခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း, နှင့်အချို့သောရောဂါများကိုကာကွယ်တားဆီးနိုင်ပါတယ်.
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံတွင်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်,တစ်ခုမှာခြောက်သွေ့သောခွေးအစားအစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းဖြစ်သည်, အခြားတစ်စိုစွတ်သောအမျိုးအစားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံဖြစ်ပါတယ်,စိုစွတ်သောအမျိုးအစားကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ပူပြင်းတဲ့ရေနွေးငွေ့ကိုထောက်ပံ့နိုင်သည့်ဘွိုင်လာနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားသည်. ၎င်းသည်အစာအမျိုးမျိုးနှင့် aqua feed အတွက် floating feeds ထုတ်လုပ်ခြင်းကဲ့သို့သောအစားအစာများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်,ငါးခူအစားအစာတောင့်,goden ငါးအစာကျွေးတောင့်,ပုစွန်အစာတောင့်, ဂဏန်း, ။, မြဝတီ, စသည်တို့, နှင့်ခွေးအစားအစာကဲ့သို့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာ,ကြောင်အစားအစာနှင့်စသည်တို့. တောင့်သည်အရွယ်အစားမှာမတူညီသောအရွယ်အစားငါးများအား ၀.၉ မှ ၁၅ မီလီမီတာအထိရှိနိုင်သည်. ဒီခွေးအစားအစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကအရည်အသွေးမြင့်မားပြီးအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များပါ, ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်သည်အလတ်စားနှင့်အကြီးစားအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံအတွက် ဦး စားပေးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်,ငါးမွေးမြူရေးခြံနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာလုပ်ငန်း.
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများ၌တည်၏, အပူချိန်နှင့်ဖိအားများအောက်တွင်ချက်ပြုတ်ထားသည်။ ၎င်းသည်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစာထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံ၏အဆုံးသို့ ဦး တည်ရွေ့လျားနေသောကြောင့်ပါဝင်ပစ္စည်းများသည်ပုံသွင်းသေနေသောသေတ္တာကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။ knife.pet အစားအစာသည်သွားရည်ခန်းခြောက်ခန်းတွင်ခြောက်သွေ့ပြီးအစိုဓာတ်ပါဝင်မှုသည် စင်ကြယ်အောင်ပြုလုပ်ပါ.
ညှစ်ညှစ်ခြင်းကိုအပူချိန်မြင့်သောအပူချိန်ကုထုံးနှင့်အချိန်တိုအတွင်းတွင်ပြုလုပ်သည်. ၎င်းသည်အစားအစာအာဟာရများယိုယွင်းပျက်စီးမှုကိုလျော့နည်းစေသည်မဟုတ်ပါ, ပရိုတိန်းဓာတ်၏အစာကြေမြှင့်တင်ရန်, ထို့အပြင် ထပ်မံ၍ အာဟာရဓာတ်မရှိသောအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ပိုးမွှားများကိုပါပျက်စီးစေပါသည်. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏ပုံစံအားလုံးသည်ပတ်ပတ်လည်ကဲ့သို့ခြောက်သွေ့သောအစားအစာဖြစ်သည်, တြိဂံ, blossom ပုံသဏ္wellာန်အဖြစ်အရိုးပုံသဏ္differentာန်ကွဲပြားခြားနားသောမှိုကနေတဆင့်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်. မိသားစုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာထုတ်လုပ်မှု၌တည်၏, အဆီပုံမှန်အားဖြင့်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်အစာအာဟာရကိုတိုးတက်စေခြင်းတွင်ပါဝင်သည်, အဖြစ်ကောင်းစွာဒီအေးစက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဖျော်ဖြေနေသည်.
ရောစပ်ခြင်းလုပ်ငန်းသည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာထုတ်လုပ်ရာတွင်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်. အခြေခံဖြစ်စဉ်မှာ fomula အရကုန်ကြမ်းများကိုအလေးချိန်အမျိုးမျိုးဖြင့်ချိန်ရန်ဖြစ်သည်, ထို့နောက်အရွယ်အစားကိုလျှော့ချရန်ကြိတ်ခွဲခြင်း၌သူတို့ကိုငါသွန်းလောင်း, နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်အားလုံးပစ္စည်းများယာယီသိုလှောင်မှု Silo ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့နေကြသည်
Extruding သည်အပူချိန်မြင့်မားပြီးအချိန်တိုအတွင်းအပူကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်. ၎င်းသည်အစားအစာအာဟာရများပျက်စီးခြင်းကိုလျော့နည်းစေရုံသာမကဘဲ, ပရိုတိန်းဓာတ်၏အစာကြေတိုးတက်အောင်, ဒါပေမယ့်လည်း anti-nutrient အစိတ်အပိုင်းများနှင့် microorganism ကိုဖကျြဆီး
ခြောက်သွေ့သောအပိုင်းကိုအဓိကအားဖြင့် extruded အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစားအစာတွင်ရေဖယ်ရှားခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်. extrusion ပြီးနောက်, ပစ္စည်း၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည်အတော်အတန်ပျော့ပျောင်းပြီးရေပါဝင်မှုသည် ၂၀ မှ ၃၀% အထိရှိသည်။. ခြောက်သွေ့ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးနောက်, အချောထုတ်ကုန်အစိုဓာတ်ကို 8% ~ 10% မှာထိန်းချုပ်ထားသည်
ဆီနှင့်အဆီသည်စွမ်းအင်အတွက်အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်, ဒါကြောင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကြီးထွားမှုလိုအပ်ချက်အရဆီနှင့်အဆီ ၂% မှ ၄၀% ကိုပုံသေနည်းတွင်ထည့်နိုင်သည်